Halyey Kooxda Liverpool ah oo kula taliyey Timo Werner inuusan ku biirin Reds! – Gool FM
(Liverpool) 22 Feb 2020. Halyeeyga kooxda Liverpool ee Didi Hamann ayaa sheegay in bartilmaameedka xagaaga ee Reds Timo Werner uu ku fiican yahay inuu ku biiro kooxda ay xafiiltamaan ee Manchester United ama Chelsea, halkaasoo uu ka heli doono damaanad qaad waqti dheeri ah.
Weeraryahanka RB Leipzig ayaa la la xiriiriyay inuu u dhaqaaqayo garoonka Anfield kaddib markii uu dhaliyay 26 gool 32 kulan uu u saftay kooxda ka dheesha horyaalka Bundesliga xilli ciyaareedkan.
Kaddib markii uu dhaliyay goolka guusha kulankii ay kooxdiisu 1-0 kaga badisay Spurs habeenkii Talaadada ee Champions League, Werner waxa uu qirtay inuu ku faanayo inuu ku faraxsan yahay in la la xiriirinayo ‘Kooxda adduunka ugu fiican’ ee Liverpool.
Isagoo la hadlyay Sky Sports xiddigii hore khadka dhexe ee Liverpool ayaa yiri: “Timo Werner si isdaba joog ah ayuu horumar u sameeyay, markale ayuu gool ka dhaliyay Champions League, waxaana uu xilli ciyaareedkan Bundesliga ka dhaliyay in ka badan 20 gool.
“Waxaan aaminsanahay inuu u ciyaaro doono koox wayn sida ugu dhaqsiyaha badan, dabcan waa u sharaf in la la xiriiriyo Liverpool.
“Su’aasha ayaa ah miyuu ku biiri doona Liverpool? Aniga ahaan aad ayuu u xoog badan yahay marka uu ciyaarayo dhexda uuna isticmaalo hubkiisa waa weyn.
“Liverpool waxay ila tahay in uu keydka ka gali karo, laakiin waxaa ka fiican inuu door-bido kooxaha Manchester United ama Chelsea.”